Mpanamboatra sy mpamatsy Optical FTTB | China FTTB Optical Receiver Factory
Mpandray optika trano
Endri-javatra 1.RF output output dia ampiasain'ny Optical Gain Control (AGC) optika, misy node optika ao anaty tamba-jotra optika iray, raha toa ka ao anatin'ny -7dBm ~ + 2dBm no misy ny herinaratra optika, tsy mila manitsy ny sandan'ny atenuation an'ny atenuator isika. amin'ity milina ity, azontsika atao ny miantoka ny ambaratonga avoakan'ny milina iray manontolo hijanona ho iray, ary ny CTB & CSO dia mijanona tsy miova, mora ny manafoana ilay tetikasa. 2.Operation platform natao xx ~ 1000MHz. 3. Fanamafisam-peo ambany fanamafisam-peo sy fanamafisam-peo ...
Endri-javatra 1.PIN fantsona fiovam-po elektrika misy valiny lehibe; 2.Tondroo ny hery optique araka ny marina amin'ny alàlan'ny fantsom-pianarana luminescent karazana kilasy folo; 3.Ny famolavolana lalana fanatsarana dia mametraka ny asa tanana SMT dingana teo aloha sy ny fanamafisana ny Module ambadika miaraka ary mamorona làlana mahazatra, izay mahatonga ny fampitana signal photoelectric ho malama sy ho mora kokoa; Ny fanabeazana 4.RF sy ny fifandanjana dia samy mampiasa famolavolana azo ovaina tsy tapaka, izay mahatonga ny debugging injeniera mety tsara; 5.Power output m ...
ZBR1002B mpandray optika optika ivelany
Endri-javatra 1.Wavelle miasa 1310nm sy 1550nm roa; Safidy 2.750MHz sy 860MHz; 3.Variety isan-karazany dia tsy voatery: AC60V, AC220V, dC-48V ary ect; 4.Volam-pandrefesana plug-in miasa: plug-in attenuator, plug-in equalizer, mpizara sampana plug-in ary mody mandefa module maivana amin'ny fikirakirana. Ampiasao ny volavolan'ny fitaovana plug-in mety amin'ny fikojakojana ny fanavaozana ny tambajotra; 5.Ga-kalitao manatsara ny maoderina dia afaka mamaly ny fitakian'ny vokatra avo lenta; 6. Advan internationale ...
Overview ZBR200 no mpandray optika tambajotram-pifandraisana CATV kilasy avo indrindra. Ity fitaovana alohan'ny kilasy ity dia mandray fitaovana fanamafisana ny Full-GaAs MMIC. Aorian'ny kilasy dia fanamafisam-peo Chip GaAs an'ny American ACA Company. Ny famolavolana fizaran-tany voatsara dia mahatonga ny fitaovana hahatratra ny indostrian'ny fampisehoana tsara. Fanaraha-maso microprocessor, fampirantiana dizitaly ireo masontsivana, mora kokoa ny debug injeniera. Izy io no fitaovana lehibe hananganana ny tambajotra CATV. Endri-javatra 1) Tube famafana fiovana photoelectric PIN valiny avo. 2) Optim ...